Loza manimba tontolo iainana maneran-tany - Ny fampitandremana avy amin'ny Semalt
Nampifantoka ny sainy ny mpamorona malware tamin'ny alàlan'ny haino aman-jery amin'ny aterineto izay mikendry ny haka ny angon-drakitra tsirairay. Izy io dia mamorona ny fahatsapana fa ireo mpamorona malware dia nisafidy ny hihemotra indray. Ankoatra ny fomba nentim-paharazana mandefitra amin'ny sehatra tsy tapaka, dia manamboatra paikady mora kokoa izao ny malware.
Nanome fampitandremana momba ny fanafihana mampidi-doza avy amin'ireo mpihoko manerantany i Oliver King, mpitantana ny Success Successor Semalt Digital Services.
Na dia misy fizahana mahery vaika aza amintsika dia mandinika ireo dizitaly dizitaly toy ny mpilalao programa mpihetsiketsika izay mampihorohoro ny fanafihana avy any ambadiky ny aloky ny kapoka, ny zava-misy dia ny ampahany manan-danja indrindra amin'ireo mpanakanto mpanakanto. Tsy manakorontana amin'ny famolavolana fomba maoderina hivoahana amin'ny rafitra fiarovana matanjaka izy ireo. Nahoana ianao no manandrana manalavitra an'izany rehetra izany rehefa azonao atao ny mametraka mpampiasa iray mba hametraka ny angon-drakitra na tsindrio ny fifandraisana?
Ireo mpanamboatra ny malware dia manome toro-hevitra amin'ny boykotts IP natao mba hahafahana mamaha ady amin'ny spam amin'ny tolotra iray mba hitazonana ny halaviran-dalana ara-stratezika avy amin'ny fahitana sy ny fidinan'ny tahiry fidirana.
Manome ny mpamorona malware mba hanapa-kevitra raha toa ka nanamboatra makia tsy misy pentina sy tsara izy ireny. Ireo serveurs dia ampiasaina ho fomba hanamarinana ilay mpanamboatra / orinasa voadona hanapa-kevitra raha velona io aretina io fa tsy Ny ankabeazan'ireo zazalahy kely ireo dia hita fa avy amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao ary manintona lavitra, mampiseho fa niezaka ny hametraka ny sehatra iraisam-pirenena manohitra ny an'ny distrika manokana ny mpamorona. (nitranga in-1)
Hanafika azy io raha toa ka hita eo amin'ny milina misy loto ny fandaharana famaha olana, ka matetika dia mampiseho ny fisian'ireo mpandinika malware. Raha toa ka mandalo ireo fanamarinana ireo, i Sarvdap amin'izany fotoana izany dia mikendry ny hampifanaraka ny pejy handrafetana an'i Microsoft mba hitsapana ny fahafaha-misafidy ary avy eo dia mifandray amin'ny server mpanisa sy mpanara-maso azy.
Izany dia tetikady mampitaha ny fampiasana fitiliana fitsaboana tranga malaky fampiasana malaky toy ny fanafody. Ampidiro amin'ny VXers miezaka ny mandinika raha hipoitra eo ambany lozan-drivotra ny mpitsidika.
Mety hiparitaka io fandrika io. Ireo mpanoratra malaso dia mahazo foana avy amin'ny mpifaninana. Ireo mpamorona ireo botnets-nokarama-drakitra goavana dia mety hahomby amin'ny fampidirana ireo fanamarinana am-pitiavana mba hanitarana ny tahan'ny sakana.
Raha jerena ny fomba ijerena ny maha-karazana heloka bevava maimaim-poana, mbola mitohy mihamitombo ny spam - mampita ny endriky ny malware, ransomware ary hafatra phishing - amin'ny fikambananan'ny isaky ny habe, i Edmunds dia nilaza fa misy "fanampiana mahasoa" izay azo alaina mba hanakanana tanteraka ireo ady ireo.
Ny iray amin'ireo dia ny fampiasana valim-panadihadiana momba ny hafatra momba ny DMARC, ny fanambarana sy ny fampifanarahana - ary ny fivoriambe fanamarinana mailaka izay manome alalana ny mpanjifa mba hamantatra ny mombamomba ny mombamomba azy ary ny inona ny spam vita miaraka amin'ny fahafaha-manatsara ny fandrosoana sy ny fiarovana Source .